Gu'ga 2017 sidee ahaan doonaa? | Saadaasha Shabakadda
Gu'ga 2017 sidee ahaan doonaa?
Maanta, Maarso 1, gu’ga saadaasha hawada ayaa bilaabmaya. Xilliga midabka ee qaar badani jecelyihiin, oo aan kuwa kale aad u jeclayn. Inta lagu gudajiro rubuckan, sidee bay cimiladu u dhaqmi doontaa? Roob ma in ka badan sidii caadiga ahayd baa? Ma noqon doonaa kuleyl ama qabow?
Waan arki doonaa siduu noqon doonaa guga 2017 sida ay sheegtay wakaaladda saadaasha hawada ee gobolka.
Bil kasta AEMET waxay saadaal ka bixisaa saddexda bilood ee soo socota iyadoo la adeegsanayo moodooyin kala duwan oo ka qaadaya xogta xilligii 1981-2010 tixraac ahaan In kasta oo aysan suurtagal ahayn in la ogaado hubaal sida cimiladu noqon doonto, waxaan fikrad ka heli karnaa adoo fiirinaya saadaashaan. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, aan aragno waxa idaacaddani noo hayso:
Guga ayaa la filayaa inuu ka kululaado sida caadiga ah Spain oo dhan. Tani waa wax aan durba ku aragnay qaybo badan oo dalka ka mid ah, halkaas oo qiyamku uu weli u dhexeeyo 5 ilaa 7 digrii oo ka sarreeya inta caadiga ah. Marka, tusaale ahaan, koonfurta Andalusia, jasiiraddan, jasiiradaha Balearic iyo jasiiradaha Canary, heerkulka ugu sarreeya wuxuu u dhexeeyaa 22 iyo 24 digrii. Inta soo hartay, inkasta oo aysan sarre u kici doonin, waxay sii joogi doonaan inta u dhexeysa 15 iyo 20ºC.
Shaki la'aan, waa qiimeyaal aad u wanaagsan, laakiin waxay caan ku yihiin dhammaadka guga / bilowga xagaaga.
Haddii aan ka hadalno roobka, waxaa jira ixtimaal ka weyn inay ka hooseeyaan sida caadiga ah jasiiradaha Canary. Dalka intiisa kale, waxay u badan tahay inay caadi ahaanayaan. Tan macnaheedu waxa weeye haddii aysan inta badan roob ka di'in deegaankaaga, sannadkan waxaa hubaal ah inuusan aad u da'in doonin.
Sidaa darteed, guud ahaan, xilli gu ’kulul ayaa la filayaa, illaa heer in ka badan hal iyo in kabadan ay hubaal tahay in ay ku maydhan doonaan barkadda ama xeebta ka hor inta aanu xagaagu imaan, oo ay qalasho.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Saadaalin » Gu'ga 2017 sidee ahaan doonaa?
Dhulkeenu wuxuu weli ku jiraa qatar inuu burburo